Google Santa Tracker 5.3.1 Android အတွက် Aptoide APK အား ဒေါင်းလုပ် ပြုလုပ်ပါ
ဗားရှင်း 5.3.1 လွန်ခဲ့သော4လက
ဂိမ်းများ ပုံမှန် Google Santa Tracker
Google Santa Tracker ၏ ဖော်ပြချက်
, 🍬 gumballs လှိမျ့, 🚀 Jetpack အတှကျဒုံးကညျြနှငျ့အမြားအပွားပိုပွီးစှမျးအားဖွငျ့စှတျဖား elves တှရေဲ့နှငျ့အတူဂိမျးကစား။ သို့မဟုတျသငျ့သညျအလှနျကိုယျပိုငျ elf 🎨🖌️ဒီဇိုငျးမှာသငျ၏လကျကိုစမျးပါ။ 24 ရောကျရှိသညျနှငျ့တပွိုငျနကျကို Santa နှငျ့ reindeer ပါကမ်ဘာတဝှမျးကသူတို့ခရီးအတှကျလကျဆောငျပို့နကွေရာကိုကွညျ့ပါ။ 🎅🤶🦌🌏🌍🌎
ပိုမိုလလေ့ာသငျယူရနျ, http://g.co/santatracker သှားရောကျကွညျ့ရှု။ ပြျောရှငျဖှယျအားလပျရကျမြား!
Google Santa Tracker အတွက် အသုံးပြုသူ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
Google Santa Tracker အပေါ် ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုများ
Google Santa Tracker အပေါ်တွင် ပြန်လည် စစ်ဆေးမှု မရှိပါ။ ပထမဆုံး ပြုလုပ်လိုက်ပါ!
apps စတိုး 2.68M 3087.02M
Google Santa Tracker နှင့် အလားတူသော အက်ပ်များကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ
APK အကြောင်း Google Santa Tracker အချက်အလက်
App Name: Google Santa Tracker
Release date: 2018-12-13 06:51:16
Google Santa Tracker APK ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ